Waxaan u furaynaa Chaty madal kasta! | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/Waxaan u furaynaa Chaty madal kasta!
Waxaan u furaynaa Chaty madal kasta!
Warku wuu baxay - badeecadayada qiimaynta sare leh ee loogu jecel yahay - Chaty, oo leh in ka badan 150,000+ rakibaadyo firfircoon iyo 600+ faallooyin-xiddigle ah - hadda waa soo saarista alaab gooni ah. Maxay tani adiga kugu tahay? Waxaad hadda isticmaali kartaa Chaty goob kasta - kaliya maaha WordPress-, Ecwid- iyo goobaha ku salaysan Shopify.
Bilihii la soo dhaafay waxaan si adag uga shaqaynaynay in aan alaabtan ka dhigno mid ku haboon baahiyahaaga intii suurtogal ah si milkiilayaasha ganacsigu ay uga faa'iidaystaan ​​qalab fudud oo guji-ku xidhidh kaas oo si wayn u wanaajin doona adeegaaga macmiisha -dammaanad. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Chaty waa in aysan u baahnayn xirfado farsamo ama khibrad iyo dejinta widget-kaaga kaliya waxay qaadataa dhowr dhagsi oo uma baahnid inaad akhrido ama raacdo hagayaasha habaynta adag.
Weli miyaanad aqoon u lahayn Chaty? Sii wad akhriska si aad si kooban u ogaato waxa ay ku saabsan tahay. Chaty waxaad ku soo bandhigi kartaa dhammaan kanaalada bulshada iyo isgaarsiinta ee aad diyaarka u tahay hal, muuqaal wanaagsan oo si buuxda loo beddeli karo widget. Ma jiraan badhammo badan ama widgets-ka goobtaada oo saameeya is-dhexgalkaaga isticmaale, mar dambe ma luminayaan wakhti macaamiishaada si ay u helaan faahfaahinta xiriirkaaga. Marka macmiilkaagu doorto kanaalka uu rabo inuu kugula xidhiidho, shaashad toos ugu socota kanaalka la doortay ayaa furmaya macmiilkaagu wuu ku xidhi karaa. si toos ah madalkaas. Adiguna waxaad kaga jawaabi doontaa madal, sidaa awgeed aad u dedejiso isgaadhsiinta.
Chaty si buuxda ayaa loo habeyn karaa wuxuuna leeyahay 20+ kanaalo bulsheed iyo isgaarsiineed oo ku dhex dhisan oo ay ku jiraan foomka xiriirka iyo kanaalada gaarka ah, iyo sidoo kale kiciyeyaasha kala duwan iyo xeerar la beegsado si loo shaqsiyeeyo widgetkaaga xitaa intaa ka sii badan.
Si loo soo koobo, waa kuwan waxa aad ku gaadhi karto Chaty:
sii macaamiishaada adeeg macmiil oo degdeg ah iyada oo loo marayo kanaalada ay jecel yihiin;
ka dooro 20+ kanaal ama ku dar kanaalada gaarka ah;
kordhiyaan fursadahaaga hogaaminta iyo iibinta;
samee widget si buuxda loo habeyn karo si aad ugu dhigtid bilicda goobtaada dhammaan kanaalada aad ka heli karto;
ku dar kiciyeyaasha gaarka ah iyo xeerarka bartilmaameedka iyadoo ku xiran baahidaada ganacsi;
Gebi ahaanba tan u deji iyadoo eber aqoon kood.
Waxaad ka akhrisan kartaa wax badan oo ku saabsan Chaty, fikradayada iyo ka shaqaynta gadaasheeda iyo sida ay ugu caawin karto ganacsigaaga boostadayada Chaty ee bilawga-buuxa ah ama is-diiwaangeli oo samee widget-ka Chaty-gaaga ugu horreeya adiga oo gujinaya badhamada hoose.
Wax badan ka akhri Chaty
Ku biir Chaty bilaash
U Dhiso Aasaas Adag oo SEO ah oo leh Shuruudaha Helitaanka Shabakadda
Xogta weyni waxay siinaysaa hab dabacsanaan badan